In the beginning… – အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
Author lettwebawPosted on6October 2009 17 February 2010 Categories Excerpts, Reproduction, Travelogue
6 October 2009 at 11:05 pm
အာ .. ဖတ်လို့ကောင်းနေမှ…ရပ်သွားပြီ။
7 October 2009 at 2:51 am
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဆရာရေ့ … ဒီနေ့က ကျမ မြန်မာပြည်ကို ခွဲခွါခဲ့တာ ၂-နှစ် ပြည့်တဲ့နေ့ပါ။
ကျမလည်းပဲ ဆရာ့လိုပါပဲ။ အသက် ၄၀ ကျော်တော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့။ (၄၀ မပြည့်ခင် ကံပေါ်တာလို့ဆိုရင်လည်း ရပါတယ်) ဒီခရီးကို လာမှပဲ နိုင်ငံခြားကိုသွားဖူးတာပါ။
ဆရာ့ထက် ဆိုးတာက (သာတယ်လို့ ပြောလည်း ရပါတယ်) အဲဒီတော့မှ လေယာဉ်ပျံကြီးကို စီးဖူးတာပါပဲ။
တောကျရန်ကောလို့ အထင်မသေးပါနဲ့။ ပြည်တွင်းလေကြောင်းတွေ လုံးဝကို စိတ်မချလို့၊ အသက်နဲ့လဲပြီး မစီးလိုတာကြောင့်ပါ။ 😀 (ဒီလိုပဲ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဖြေသိမ့်ရတယ်)
ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်ပြောနေတာနဲ့ ဆောင်းပါးအကြောင်း မပြောဖြစ်သေးဘူး။ ဆရာ့စာဖတ်ပြီး ဆရာ့ဓာတ်ကူးသွားတာ။ ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကို ချော်ပြီး ဟိုရောက် သည်ရောက်ပေါ့။
ကဲ ပြောပြီ … လိုရင်းကို။
မြန်မာပြည်က စာရေးဆရာတွေ၊ ဂျာနယ်လစ်တွေ နိုင်ငံခြားသွားရင် ခရီးသွားဆောင်းပါး အခန်းဆက်ကြီးတွေ မုန်းလောက်အောင် ဖတ်ရလွန်းလို့ ခရီးသွားဆောင်းပါးဆို လန့်နေပြီ။ သို့ပေသည့် ဆရာ့ဆောင်းပါး ဖတ်လို့ကောင်းပါတယ်။ (အဟုတ်ပြောတာပါ) ဆူဒိုနင်ကလောင်နဲ့ ရေးတာမို့ ထင်တယ်။ ဆရာမင်းလူလိုပြောရရင် အတ္တကျော်လို့ ဇွတ်ဆရာလုပ်တာတွေ မပါလို့လည်း ပိုပြီး ဖတ်လို့ကောင်းတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ 😀
တခုပဲ … ဆရာ့ဝေါဟာရတချို့က ဖတ်ရတာ ထောက်တောက်တောက် ဖြစ်နေတာပါ။ ဥပမာ – ဘွတ်ခြေနင်း၊ ချွေတာရေးတန်း၊ အလုပ်ကြီးအကိုင်ကြီးတန်း၊ ရွေ့လျားစင်္ကြံ .. စသည် စသည်ပေါ့ ဆရာရယ်။ နည်းနည်းထောက်နေတော့ ဖတ်ရတာ ခက်သလားလို့ပါ။ ဒါပေမဲ့ … ဒါကလည်း …. ဓာတ်ချောစာတို့ ပါလေရာဖုန်းတို့လိုမျိုး (မလိုအပ်ဘဲ) ထွင်တတ်တဲ့ ဆရာ့စတိုင်ဆိုတာ သဘောပေါက်ပါကြောင်း။
7 October 2009 at 10:28 pm
ဟောတော့… ဓာတ်ချောစာက မလိုအပ်ဘဲထွင်တာတဲ့လား… နေ့အိပ်မက်က အဲလိုတွေ ဘာသာပြန်ပေးတတ်တာ ဆရာ့ရဲ့ အကောင်းဆုံး အရည်အချင်းလို့ သတ်မှတ်ထားတာ… မြန်မာပြည်မှာ စာရေးဆရာတိုင်းသာ ဆရာ့လို မွေးစားစကားလုံးတွေ ဘာသာပြန်ပေးတဲ့သူတွေဆိုရင် မြန်မာစကားအတွက် စိတ်ချရပြီ…
ဒါနဲ့ စစကတည်းက သားရေဖိနပ်မစီးဘဲ ကတ္တီပါစီးရင် ဆရာခြေသန်းမကျိုးလောက်ဘူးထင်တယ်… 😛
9 October 2009 at 1:55 pm
ကတ္တီပါ ဖိနပ်လည်း စီးဖူးပါသဗျာ။ ခြေဆီနဲ့ ကတ္တီပါနဲ့ကလည်း လိုက်မှ လိုက်။ ဖိနပ်ကလေးက ရေမွန်းနေတဲ့ ကြွက်စုတ်လေးလိုဖြစ်၊ လမ်းပေါ်က ဖုတ်တွေ သဲတွေက ရွှံ့တွေဖြစ်ပြီး ကတ္တီပါအမွေးတွေကြားမှာ ကပ်၊ အံမယ်မင်း… သူများ မပြောနဲ့၊ ကိုယ့်ဖိနပ်ကိုယ် ပြန်မြင်ရတာတောင် အန်ချင်တာနဲ့ အဲဒီ့စမ်းသပ်မှုကို လက်လျှော့ခဲ့ရကြောင်းပါ။
အလုပ်ကြီး အကိုင်ကြီးတန်းလို့ ဘာသာပြန်တာကို အရမ်းကြိုက်သွားတယ်။ အဲဒီအတန်းက တစ်ခါမှ မစီးဖူးပါဘူး။
စီးဖူးတဲ့အခေါက်ကလည်း လက်တစ်ဖက်ပဲ ရှိတာကိုး…။ 🙂
(အစိုးရ)အလုပ်က လွှတ်တာကလည်း အလုပ်ကြီး အကိုင်ကြီးတန်းဆို တော်တော်ကြီးမှ ဆရာရေ့…၊ ဆရာလည်း အလုပ်ထဲမှာ တော်တော်(ရာထူး)ကြီးတယ်ထင်ပ.. 😀
8 October 2009 at 3:51 pm
သိပ်မကြီးပါဘူး။ ဖွဲ့စည်းပုံအရ ပြောမယ်ဆိုရင် သံရုံးက ဒုတိယအတွင်းဝန် ရာထူးနဲ့ အညီသာဖြစ်ပါတယ်။ ဒေသခန့်ဝန်ထမ်းထဲမှာတော့ ဂရိတ်အမြင့်ဆုံးပဗျာ။ သို့သော် သူတို့ရဲ့ ၀န်ထမ်းစည်းမျဉ်းထဲမှာ ပင်လယ်ရပ်ခြား ခရီးသွားတဲ့အခါ အလုပ်ကြီးအကိုင်ကြီးတန်းက စီးခွင့်ပေးထားပါတယ်။ အဲသလို စီးခွင့်ပေးထားတဲ့ အတွက် ခရီးသွားနေတဲ့နေ့ရက်များမှာ စားစရိတ် နေ့တွက် သတ်သတ် မပေးတော့ပါဘူး။ အလုပ်ကြီး အကိုင်ကြီးတန်းက ဖြစ်တဲ့အတွက် အစားအသောက်ကို ကောင်းကောင်းနဲ့ အလျှံပယ် စားနိုင်နေလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကလည်း ကြွယ်ဝတဲ့ နိုင်ငံလည်း ဖြစ်နေတာကြောင့်သာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ သြစတြေးလျနိုင်ငံမှာဆိုရင် အလုပ်အကိုင်မရှိသူတွေအတွက် အစိုးရက ပေးတဲ့ ထောက်ပံ့ကြေးကတောင် ဖူလုံရုံမက ပိုပိုလျှံလျှံရှိတယ်လို့ ကြားနာ မှတ်သားဖူးပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂ လက်အောက်ခံ အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ အချိန်ပိုင်း အလုပ်လုပ်ပေးရင်းနဲ့လည်း ပြည်တွင်း ပြည်ပ ခရီးသွားဖူးပါတယ်။ သို့သော် ချွေတာရေးတန်းကသာ စီးနင်းခွင့်ရပါတယ်။ အဲဒါတွေမှာကျတော့ ၀န်ကြီးအဆင့်နဲ့ ဌာနေကိုယ်စားလှယ်အဆင့်ကိုသာ အလုပ်ကြီးအကိုင်ကြီးတန်းက စီးခွင့်ပေးတယ်လို့ သိရပါတယ်ခင်ဗျား။
LeaveaReply to နေ့အိပ်မက် Cancel reply
Previous Previous post: Min Lu’s Rare Foreword
Next Next post: Royal Me!!!